Miraikitra amin'ny satro-boninahitra? Tsidiho i Malta ary araho ny dian'ireo mpanjaka
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Malta » Miraikitra amin'ny satro-boninahitra? Tsidiho i Malta ary araho ny dian'ireo mpanjaka
Ny Mpanjakavavy sy Prince Phillip any Valletta Malta
Nahasarika olo-malaza eran'izao tontolo izao i Malta, saingy fantatrao ve fa ny iray amin'ireo vahiny notahin'i Malta indrindra dia ny Mpanjakavavin'i Angletera?
Ity andiany Netflix mifototra amin'ilay lalao nahazo loka ity, "The Audien," dia sary feno tantaram-piainana feno fiainana ny Mpanjakavavy Elizabeth II. Ny fisokafan'ny The Crown mampiseho an'i Queen Elizabeth sy Prince Phillip any Malta, entina anaty sambo haingam-pandeha ny Mpanjakavavy raha maka sary ny printsy mivoy ao amin'ny rano manga any Malta (Season 1, Ep. 1). Amin'ny fizarana iray hafa, naneho ny faniriany hiverina any Malta i Prince Philip ary hiverina amin'ny fotoana falifaly.
Villa Guardamangia, Villa Elizabeth's Villa ao Malta
Matetika i Queen Elizabeth II dia niala sasatra tany Malta ary nandany izay nantsoiny, ny taona sambatra indrindra tamin'ny fiainany, mipetraka ao Villa Guardamangia. Ny trano fonenana dia toeram-ponenan'i Princess Elizabeth sy Prince Phillip tamin'izany fotoana izany raha mbola niasa tao Malta ho manamboninahitra iray izy. Nankalaza ny faha-24 sy faha-25 taonany tao izy, ary koa ny faha-60 taonany sy Prince Phillip. Nofaritany i Malta ho toerana tokana ahafahany miaina ara-dalàna, tsy misy fijerin'ny haino aman-jery henjana niainany tany Angletera.
Villa Guardamangia dia namidy tamin'ny taona 2019 ary nahazo antso ambony avy amin'ny tranokala samihafa, izay nahatonga ny Governemantan'i Malta hividy haingana ilay trano sahabo ho $ 5.3 tapitrisa USD. Sampan-draharaha misahana ny vakoka any Malta sy Buckingham Palace dia miara-miasa amin'ny "fanarenana" ny villa alohan'ny hisokafan'ny besinimaro azy.
Valletta Coast, Credit - Fahefana fizahan-tany any Malta
Ny nosy main-tanin'i Malta, eo afovoan'ny Ranomasina Mediterane, dia manana fonenana miavaka indrindra amin'ny lova efa voaorina, ao anatin'izany ny hakitroky UNESCO lova lehibe indrindra amin'ny toerana misy firenena na aiza na aiza. Valletta namboarin'ny Knights of St. John mpiavonavona dia iray amin'ireo fahitana ao amin'ny UNESCO sy ny renivohitry ny kolontsaina eoropeanina ho an'ny taona 2018. Ny fiarovana an'i Malta amin'ny vato dia miainga amin'ny maritrano vato tranainy indrindra eran'izao tontolo izao, ka hatrany amin'ny iray amin'ireo mahatahotra indrindra an'ny Empira Britanika rafitra fiarovana, ary ahitàna fifangaroana maritrano vita amin'ny tokantrano, ara-pivavahana ary ara-tafika hatramin'ny vanim-potoana taloha, antenatenany ary tamin'ny vanim-potoana taloha. Miaraka amin'ny toetrandro mamirapiratra izaitsizy, morontsiraka manintona, fiainana andalam-piainana miroborobo, ary tantara 7,000 taona manitikitika, dia misy zavatra maro azo jerena sy atao. Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i Malta, tsidiho www.visitmalta.com.
Vaovao misimisy momba an'i Malta.